Google Goes Into Browser War with Chrome!
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 2:43:00 AM | Links to this post
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ Blog ကို လိပ်စာ အသစ်ပြောင်းထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်က လိပ်စာ တစ်ခုခုနဲ့ ၀င်ကြည့်ပေးပါ။
Hi. I'm no longer writing on this blog. I haveanew one on following addresses. Thank you
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 10:32:00 AM | Links to this post
ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog အသစ်ကို June 1 ရက်နေ့မှာ တင်ပေးမယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ကြုံခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကတော့
- MM Geeks ကနေ Host လုပ်ပေးတဲ့ wordpress blog ကို domain ပြောင်းဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Nargis ၀င်သွားပါတယ်။
- Nargis ပြီးလို့ ကွန်နက်ရှင်တွေ ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ လှုပ်ရှားနေရလို့ Blog ကို လုံးဝ ပစ်ထားခဲ့ရပါတယ်။
- ကျွန်တော် အခု ဒီမှာ settle ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ wordpress ကို access လုပ်လို့မရတော့ပါ။
- MM Geeks ကို Techinical အကူအညီတောင်းပေမယ့် Hosting ပိုင်းကိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ မအားလပ်လို့ fix မလုပ်နိုင်သေးတာပါ။ (I'm not blaming the mm geeks ;) )
အခုတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် Windows Hosting ကို Linux ပြောင်းပြီး wordpress နဲ့ run ပါတော့မယ်။ (Switching is in process)။ ဒီအတွက် Reader တွေက ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ Domain ကလဲ အခုအတိုင်းပဲ ("blog.atomicdevelopment.net") ရှိပါလိမ့်မယ်။
နောက်အကျဆုံး ဇူလိုင်လ ကုန်လို့ မှန်းထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နောက်မကျစေရပါဘူး :)
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 8:26:00 PM | Links to this post
R Blog..! [Version 2.0] Comming Soon!!!!
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 10:43:00 PM | Links to this post
Labels: Blog, Special Events
Blog ရေးတာကို ခဏ ရပ်ချင်တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ရှေ့ရေးနဲ့ ကျောင်းကိစ္စတွေကြောင့် Blogging ကို ၁ လ သို့မဟုတ် ၂ လလောက် ခဏ ရပ်ထားချင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လဲ မရပ်ချင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အခြေအနေက ဒီအလုပ်တွေကို ခဏ ရပ်ပြီး ဟိုဖက်ကို အာရုံစိုက်ရမှာကြောင့်ပါ။
လက်ရှိ ရေးဖို့ ကျန်နေတဲ့ Post ၃ ခုလောက်ကိုတော့ ရအောင် တင်သွားပါမယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ ခဏရပ်ပါတော့မယ်။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ကျွန်တော့် Blog ကို လာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချပါ။ ကျွန်တော် ခဏပဲ ရပ်တာပါ။ အဆင်ပြေတာနဲ့ ချက်ချင်း ပြန်ရေးသွားမှာပါ။ Blog ရေးရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 12:30:00 AM | Links to this post
Labels: Announcement, Blog, Myself
Repair your infected registry with iRepairman
မနှစ်က ကျွန်တော် Blog ကို စပြီးရေးခါစ စက်တင်ဘာလက Virus ကိုက်သွားလို့ Registry ထိပြီး Folder Option ပျောက်တာ၊ Task Manager ပိတ်ခံရတာတွေကို ပြန်ဖွင့်တဲ့ အကြောင်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ Computer Journal ထဲမှာလဲ ပါဖူးတဲ့ iSoft (Technomation ) က ထုတ်တဲ့ iRepairman ဆိုတဲ့ tool ကို သုံးပြီး registry ပြဿနာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေရှင်းလို့ရပါပြီ။
Apple ရဲ့ Mac interface ပုံစံနဲ့ စွဲမက်စရာ tools မှာ Folder Options, Registry Editor, Task Manager ကို ပြန်ပြီး ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ Program size ကလဲ 1.2 MB ပဲရှိတဲ့အတွက် 1.44 Floopy Disk ထဲမှတောင် ထည့်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Computer Service လုပ်တဲ့သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
- Download iRepairman
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 11:21:00 PM | Links to this post
MySM is FREE now!
My Myanmar Unicode ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Technomation Studios ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ MySM ဆိုတာ Mobile ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာနဲ့ SMS ပို့နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ Mobile Application ပါ။
အခုတော့ အဲဒီ MySM ကို Technomation Studios ကနေ အခမဲ့ ဖြန့်ချီပေးလိုက်ပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Free ဖြန့်ပေးတာကို အသုံးပြုပြီးလို့ သဘောကျတယ် နှစ်ခြိုက်တယ်လို့ ခံစားရလို့ Technomation Studios ကို အခကြေးငွေ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ပေးလို့ရပါတယ်(ငွေ ammount မသတ်မှတ်ထားပါဘူး) ။ ဒီလို ရရှိလာတဲ့ ငွေများကိုလဲ မြန်မာ တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများအတွက် ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 10:48:00 PM | Links to this post
Hide Your Datas With My Lockbox!
ဟိုရက်ပိုင်းက ကိုယ့်စက်ရဲ့ Data တွေကို ဘယ်လို ဖျောက်ထားမလဲ ဆိုပြီး Post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို အလုပ်ရှုပ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ရင် အခု ကျွန်တော် ရှာတွေ့ထားတဲ့ My Lockbox ကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။
My Lockbox က Free ပါ။ Windows Vista မှာလဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Folder တစ်ခုလုံးကို ဖျောက်ထားနိုင်ပြီး Safe Mood ထဲကနေ ၀င်ကြည့်ရင်တောင် ဖျောက်ထားတဲ့ Folder ကို မမြင်ရဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
၁။ My Lockbox ကို ဒီမှာ Dowload လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Computer ကို Restart တစ်ခါ လုပ်ပေးရပါမယ်။
၃။ My Lockbox ကို ခေါ်တဲ့ Shortcut က Ctrl + Shift + P ပါ။
၄။ Default အနေနဲ့က Document ထဲမှာ My Lockbox ဆိုတဲ့ Folder ကို Hide လုပ်ဖို့ ရွေးထားပါတယ်။
၅။ အောက်မှ ပြထားတဲ့ ပုံထဲက အနီရောင် ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်စိတ်ကြိုက် Folder ကို ဖျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၆။ Advanced ထဲမှာတော့ Password ပြောင်းတာနဲ့ Skin ပြောင်းတာတို့ကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Rapster88 အချိန် 3:11:00 PM | Links to this post
Labels: Tips Tricks and Tweaks, Useful Applications
Digg Buttons added. Readers can Digg my post from now on!!
Tips Tricks and Tweaks (58)
Useful Applications (23)
Useful Websites (8)
SelectablogZeroTrash 21Nyi Lynn SeckSaturn God Hacker For All Group Chaos, The Poem Lover Tazar44 Ma Melody Maung
အမြဲကြည့်ဖြစ်တဲ့ site တွေRaymond CCKez NewsMy Digital LifeCustomizeTalk Phoewa
user(s) online now.
မကြာခင်မှာ ကြုံရတော့မယ့် အတွေ့အကြုံ သစ်တွေကို စဉ်းစားရင် ရင်ခုန်သံ စည်းချက် မြန်နေတယ်။
R Blog..! ရှိ ဖော်ပြရေးသားချက်များကို အခမဲ့အဖြစ် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လွတ်လတ်စွာ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ရရှိရန် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက R Blog Owner ထံတွင် ခွင့်တောင်းပါရန်။ မိမိတို့၏ Blog များ Webpages များတွင် R Blog..! ရှိ ဖော်ပြရေးသားချက်ကို တိုက်ရိုက်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ ဖော်ပြလိုပါက "Source:" အဖြစ် R Blog..! သို့ Link မဖြစ်မနေ ပြန်ချိတ်ပေးရမည်။ R Blog..! ရှိ ဖော်ပြရေးသား ချက်များကို ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြင့် တဆင့်ပြန်လည် ရေးသားခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။ ထိုအတွက် Link ပြန်ချိတ်ပေးခြင်းများ ရှိခဲ့လျှင်လည်း အထူးကျေးဇူး တင်ပါသည်။ R Blog..! ရှိ Tips Tricks and Tweaks အချို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ Hardware Software အစရှိသည်တို့ ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်လာခဲ့ သည် ရှိသော် အစအစ အရာရာကို R Blog..! မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အတွက် မိမိတို့၏ အသိဥာဏ် ဦးနှောက်နှင့် ဆင်ချင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပေး လိုပါသည်။ R Blog..! ရှိ စာသားများ ပုံများနှင့် သံစဉ်တေးသွားများသည် R Blog..! အပိုင်များရှိသလို အခြားသော Blog များ Website များမှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တဆင့်သွယ်ဝိုက် ရယူထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
Original Template by Blogger | Modified by ZeRoTrash